Maamulka Gobolka Bari oo shaaciyay in la joojiyay Golihii deegaanka Ee Degmada Ufeyn – SBC
Maamulka Gobolka Bari oo shaaciyay in la joojiyay Golihii deegaanka Ee Degmada Ufeyn
Shir jaraa’id oo uu manta ku qabtay Xarunta Gobolka Bari Gudoomiyaha Gobolka C/samad Maxamed Galan ayaa waxaa uu ku shaaciyay in la kala diray Golihii Deegaanka ee Degmada Ufeyn oo dhawaan la soo dhisay isaga oo sheegay in war ka soo baxay Wasaarada Arimaha Gudaha iyo Madaxtooyada Puntland arintaas loo hakiyay.
Degmada Ufeyn oo dhawaan ay masuuliyiin ka socda Maamulka Puntland u tageen soo dhisida Golaha Deegaanka ee Degmadaas ayaa waxaa la sheegay in qaabka soo xulida Xildhibaanada Golaha Deegaanka uu khaladka ka yimid Waxaana Maamulka Gobolka Bari uu sheegay in ilaa amar danbe aysan wax shaqo ah qaban doonin Golihii Deegaanka ee Dhwaan la soo dhisay.
Gudoomiyaha Gobolka Bari Mr Galan ayaa sheegay in Degmada uu gudoomiye KMG uu ka sii ahaan doono Gudoomiyihii Hore ee Degmada Isaga oo sheegay in Gudoomiye Bashiir Canshuur uu sii wadi doono howlihii maamulka ee Degmada Ufeyn.
Joojinta golaha Deegaanka Degmada Ufeyn ee Gobolka Bari ayaa Imaaneysa Xilli Wasaaradaha Arimaha Gudaha ee Puntland ay mudooyinkan ay ku howlaneyd sidii gole Deegaan loogu sameyn lahaa Degmooyin ka tirsan Gobolka bari iyadoo Degmooyinka ugu danbeeyay ee Dhwaan loo dhisay Golaha Deegaanka ay ka mid tahay Degmada Qandala ee Gobolka Bari.
Gudoomiyaha Gobolka bari ma sheegin Xilliga ay dib u bilaabmeyso gole u sameynta Degmada Ufeyn oo la joojiyey Gole u sameynteeda ka dib markii si aan munasib ahayn loo soo xulay Xildhibaanada Golahaas.